किन फरफराउँछ आँखा ? जानीराखौं - Nepal's Online News
किन फरफराउँछ आँखा ? जानीराखौं
तपाईले अफ्नो शरीरका अङ्ग फरफराएको कत्तिको महशुस गर्नु हुन्छ ? हाम्रो शरीरका अङ्ग फरफराउँदा अरुलाई भन्दा आँखालाई बढी महत्व दिने गरिन्छ । हाम्रो समाजमा आँखा फरफराउनुलाई कुनै घटना वा खबरप्राप्तिको पूर्वसंकेतसित जोडने गरिन्छ । दाहिने आँखा फरफरायो भने शुभ, देबे्र फरफरायो भने अशुभ समाचारको सुचकको रुपमा लिने गरिन्छ । यो विलकुल गलत मान्यता हो ।
आँखा फरफराउनु पुर्णतया हाम्रो जैविक कारण हो । आँखा वरपरका साना मांसपेशी तथा नशामा हुने हलचलकै कारण आँखा फरफराउँछ । प्रायः माथिल्लो ढकनी फरफराउँछ भने कहिलेकाही दुबै ढकनी फरफराउन सक्छ । यो फरफराई केही सेकेण्ड देखि केहीघण्टासम्म हुनसक्छ । कसैकसैलाई हप्तादिनसम्म पनि आँखा फरफराउने गर्छ ।
आँखा फरफराउनु सामान्य हो । कसैकसैमा यति जोरदार हुन्छ कि हामी दुबै आँखा चिम्लिन बाध्य हुन्छौ । यस्तो अवस्थालाई मेडिकल भाषामा ब्लोफ्यारोस्पाजम भनिन्छ । आँखा सँगसँगै यदि आधा अनुहार पनि चल्यो भने, त्यसलाई प्रायः फेसियल नर्भ भन्ने नशाको समस्या मानिन्छ । यस्तो समस्यामा आँखा पूर्णरुपमा बन्द हुन्छ र यो प्रकृया लामो समयसम्मचलिरहन्छ । यसले गर्दा दृष्टिमा पनि समस्या हुन्छ ।
प्रायः आँखा फरफराउनु पीडा तथा भयमुक्त हु्न्छ र यसले दृष्टिमा केही असर गर्दैन । केही सेकेण्डमै हराउने यो समस्यालाई कुनै उपचार चाहिदैन । यद्यपी, यो समस्या कारक छ भने पिडितलाई धेरै अप्ठ्यारो पार्नसक्छ ।
आँखा फरफराउनुका कारण
१. ईडियोपेथिक (बिनाकारण)
४. आँखाको दुखाई
५. धुम्रपान, मद्यपान तथा क्याफिन
६. सुख्खा आँखा
९. पोषकतत्वको कमी र असन्तुलनता
१०. बढि उज्यालो